October 17, 2019 - Myitter
အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ ဒေဝ(Dave) တို့ရဲ့အားပြိုင်မူ…ရုပ်သံ ဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲ…?
October 17, 2019 Myitter 0
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအန်ဆန်းဟာ One Champion ပြိုင်ပွဲရဲ့ MMA ဖိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ဝိတ်တန်း ၂ ခုရဲ့ ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ရရှိထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်…သူဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်…သူ့အကြောင်းကတော့ အထူးပြောစရာမလိုလောက်အောင် ပရိသတ်အားလုံးက သိထားကြတာပါ… ဒီလိုပဲ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ […]
ယခုနှစ် တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲအတွက် ဆုကြေးများ တိုးမြှင့်ပေးထား……..
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တောင်ကြီးတန် ဆောင်တိုင်ပွဲတော် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ နေ့လယ် ပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ “ညမီးကြီးအတွက် နှစ်သိမ့်ဆုကိုတော့ ၃ သိန်းခွဲအထိ တိုးမြှင့်ပေး […]
အမေရိကန်က ရာနှုန်းပြည့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဖြင့် ရန်ကုန် ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်တွင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်မည်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၈သန်းရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်ဟု အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီအကြား ဆွေးနွေးမှုများအရသိရ အစိုးရပိုင်မြေဧက ၆၀ပေါ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၈သန်းရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်ဟု အစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီအကြား ဆွေးနွေးမှုများအရသိရပါတယ်။ ရန်ကုန် ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်တွင် အမေရိကန်က ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် စတင်စီစဉ်နေပြီဖြစ်သည်။ HUBS MK CO.,Ltd အမည်ရှိ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်က ကော်မရှင်အစည်းအဝေး(၁၆/၂၀၁၉) […]
သူများထက် နှာတစ်ဖျားသာပြီး စရိတ်နည်း ဖို့ ဆန်ဆေးရေကို အချဉ်ဖောက်ပြီး ဒီလိုအသုံးပြုပါ
စရိတ်နည်း ဖို့ ဒီလိုအစပြုပါ။ သင့်အိမ်ကဆန်ဆေးရည်တွေကိုအကျိုးရှိမဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာမ သုံးစွဲဘဲသွန်ပြစ်နေခြင်းမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့်သင်ဟာစိုက် ပျိုးရေးနဲ့ ပါတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပိုလို့ တောင်ဆင်ခြင် သင့်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်မှာဘာတွေပါသလဲဆိုရင် သက်ရှိများကို အကျိုး ပြုနိုင်သောဓါတ်အဟာရတွေမြောက်များစွာပါဝင်နေပါတယ်။လို့သာအလွယ်မှတ်လိုက်ကြပါစို့။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုဟန့်တား စေနိုင်ခြင်း၊ မဖြစ်မနေကျိုးရမဲ့ “သွား” တွေကို ခိုင်ခန့်စေနိုင်ခြင်းနှင့် ဖြူသွားတဲ့ “ဆံပင်”တွေတဖန်ပြန်ပြီးမဲနက်လာစေနိူင်ခြင်းဆိုတဲ့အထိအစွမ်း အာနိ သင်မျိုးတွေ […]
Sinon စိတ်နေစိတ်ထားလေးကတော့ အရမ်းကို လေးစားနေမိပါပြီနော်
ပိုလီယို ဖြစ်ပြီး လမ်းမလျောက်နိုင်တော့အပြင် ကိုယ်ဝန် ၄ လနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို နိုင်ငံကျော် ဖိလစ်ပိုင် LGBT မော်ဒယ် Sinon Loresca ကိုယ်တိုင်သွားရောက် အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီး အလှူငွေများလှူဒါန်းခဲ့ပါကြောင်း သိရှိရသည်။ Sinon စိတ်နေစိတ်ထားလေးကတော့ အရမ်းကို လေးစားနေမိပါပြီနော်Sinon ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကို ဝေဖန်ပေးကြပါအုံးနော် #Myanmar #Yangon […]
လူသားများမဖူးရတဲ့​စေတီထူး ၃ ဆူဆိုတာရှိပါတယ့့့် 
လူသားမဖူးစေတီထူး လူသားများမဖူးရတဲ့​စေတီထူး ၃ ဆူဆိုတာရှိပါတယ့့်(၁) စုဠာမဏိစေတီတော် (၂) ဒုဿစေတီတော် (၃) မဟေသရစေတီတော်တို့ ဖြစ်ကြတယ်။ (၁)စုဠာမဏိစေတီတော်ဆိုတာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ သကြားမင်းတည်ထားတဲ့ စေတီဖြစ်တယ်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဟာ ကဏ္ဍကမြင်းကိုစီးပြီး မောင်ဆန်နှင့်အတူ တောထွက်ကြရာမှာ အနော်မာမြစ်ကိုရောက်သောအခါကဏ္ဍကမြင်းနှင့် မောင်ဆန်ကို […]
သင့်အိမ်မှာ အညံ့တွေကင်းပြီး အကောင်းတွေ ဝင်လာအောင် ဒီလိုပစ္စည်းတွေရှိနေရင် အခုဘဲဖယ်ရှားလိုက်ပါ
အညံ့တွေကင်းပြီး အကောင်းတွေ ဝင်လာအောင် သင့်အိမ်မှာ ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားပါ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတိုင်းမှာ စွမ်းအင်တစ်ခုစီရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ တစ်ချို့အသုံးအဆောင်၊ ပရိဘောဂတွေကို မထားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အဲ့ဒီ့ပစ္စည်းတွေကနေတစ်ဆင့် အညံ့တွေဝင်လာနိုင်လို့ပါ။ ဘာပစ္စည်းတွေလည်းဆိုတာကိုကြည့်ပြီးရင် သင့်အိမ်ကိုလည်း ရှင်းလင်းလိုက်ပါနော်။ ဒါဆိုရင်တော့ အညံ့ကင်းပြီး အကောင်းတွေ ဝင်လာနိုင်ပါမယ်. (၁) သံချေးတက်နေတဲ့ပစ္စည်းများ […]
ဘဝမှာ ကိုယ်အရမ်း ကြွေခဲ့ရသော idol ကြီးနဲ့ အပြင်မှာ တွေ့ခွင့် ရတာ ရင်တွေ မတရားခုန် ပျော်ပြီဗျာ ဆိုတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ Myanmar Idol Season (3)ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Winnerဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဖြိုးမြတ်အောင်က အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ဖို့ သူဝါသနာပါတဲ့ သီချင်းတွေကိုကြိုးကြိုစားစားနဲ့ သီဆိုပြီး အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အခွေဖြစ်တဲ့ “သင့်အတွက် မနက်ဖြန်” ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော်တေးအယ်ဘမ်ကလည်း မကြာမီအချိန်မှာထွက်ရှိတော့မှာလို့လည်း သိရပါတယ်။ […]
ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ကျောင်းများကို မည်သူမှ မလှူဒါန်းရဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ထုတ်
ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အခြေခံပညာကျောင်းများကို မည်သူမှ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းခွင့်မရှိဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်သည့် ပြဿနာများရှိလာနိုင်မည်စိုး၍ဟု သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်၊အောက်တိုဘာ ၁၆ရက်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိပါက အခြေခံပညာကျောင်းများကို မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊လူပုဂ္ဂိုလ်မဆို တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းခွင့်မရှိတော့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ ရုံးများသို့ အဖွဲ့အစည်းများက သော်လည်းကောင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီက […]
နှစ်ရက်အတွင်း လမ်းမအထက်တွင် အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြွေလွင့်ခဲ့ တဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေး နှင့် ကျောင်းဆရာမလေး
နှစ်ရက်အတွင်း အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြွေလွင့်ခဲ့ တဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေး နှင့် ကျောင်းဆရာမလေး သူနာပြုတယောက် ၁၂ ဘီးကားအောက်ရောက်ပြီး ပွဲချင်းပြီးပါပဲ သေဆုံးသူ ကောင်မလေးရဲ့မိသားစုဝင်တွေ မသိသေးပါဘူး … ဒီမနက် (8:00)လောက်က မော်လမြိုင်ဈေးကြို ကားဝင်းရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သူနာပြု Nurse ကောင်မလေးတယောက် ၁၂ […]